TaiG inogadziridza kuputsika kwayo kwejeri kuita vhezheni 2.1.3 | IPhone nhau
Taig yakaburitswa vhezheni 2.1.3 yeiyo yayo iOS 8.1.3-8.3 yevasungwa yekushandisa chishoma awa rapfuura. Nhau dzakanaka kuneavo vachine matambudziko panguva kana mushure mekuiswa kwejeri. Pakati pezvinhu zvakakosha zvikuru ndeyevimbiso yekugadzirisa, kamwechete kwenguva dzose, iro dambudziko rakakurumbira rinosiya kuisirwa rakamira pa20%. Vakatobudirira here kana iwe ucharamba uchitaura mabugs? Kutendeseka, ndine kusahadzika kwangu nezvekumhanyisa kwavakaita neiyi jailbreak. Ndichiri kutarisira kuti unotaura nezve bugs.
Zvakare, iyi vhezheni inowedzera kuenderana neshanduro yazvino yeCydia, 1.1.18. Kubva pane zvinyorwa zvekushandurwa kweiyi vhezheni uye zvakapfuura, TaiG jailbreak 2.1.3 inofanira kunge iri vhezheni yavaifanira kunge vakaburitsa pakutanga. Ini ndinofunga tese tingadai takakunda, vakaisanganisira sezvo Pangu aisazoburitsa kuputsika kwake kwejeri kusvika kuburitswa neruzhinji kweIOS 8.4. Iwe une rondedzero izere yeshanduko (iyo iwe yaunogona kuona mune iyo skrini pamusoro) mushure mekusvetuka
Yakagadzirisa dambudziko rekuti rinogara rakagadziriswa pa20% painopunzika mujeri
Yakagadziridzwa yeCydia 1.1.18 uye UIKitTools 1.1.0; gadzirisa kushaikwa kwemifananidzo dambudziko mushure mekupunzika kwejeri.
Yakagadziriswa yakareba bhutsu nyaya pa iPhone 4S mushure mejeri.
Yakagadzirisa nyaya yakadzivirira TaiG kutsemuka kwejeri kushanda mumushini chaiwo.
Vaya imi vatova nejerebreak yakaiswa muchaona iyi yekuvandudza muCydia. Iwe haufanire kuita jailbreak zvakare neichi chishandiso. Asi, kana iwe usiri kuda kumirira, iwe unogona kuteedzera iyo mirairo ye NYAYA IYI.
Webhusaiti yeTaiG yanga iri pasi kwemaminetsi akati wandei kubvira pavakazivisa kuburitswa kweiyi nyowani vhezheni yemajeri avo. Pazasi ini ndinowedzera maviri maratidziro ekurodha pasi, imwe kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti uye imwe yandakaisa kuitira kana iyo yepamutemo link ikakundikana. Usazeze kutaura kana matambudziko ese apera kugadziriswa kana, zvirinani, mazhinji acho.
Dhawunirodha TaiG Jailbreak 2.1.3
Imwe nzira Dhawunirodha TaiG Jailbreak 2.1.3
Dzidziso kune jailbreak iOS 8.1.3-8.3
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » TaiG inogadziridza yayo jailbreak kune vhezheni 2.1.3 yekugadzirisa zvikanganiso
Uye kana zvikafamba zvakakwana neiyo yapfuura vhezheni yeTaig, kuitira kuti ndisafanirwe kudzoreredza uye kushandisa iyo jailbreak, ndinoigadzirisa sei kune iyi vhezheni?
Ingoenda kuCydia uye gadziridza shanduko dzese.
Inotsanangurwa munhau: Vhura Cydia uye iyo yekuvandudza ichaonekwa 😉
Izvo hazviratidzike mune cydia
Pindura kuna Elcalan
Ini ndichangotenga iyo mini mini 3 uye ndiri kushandisa iyi vhezheni yetaiG uye yakanamatira pa20%.
Ini ndakaita Jailbreak nezuro neshanduro 2.1.2, uye zvese zvave kushanda mushe. Ini ndinofanira kusungwa zvakare?
Iwe haufanire kuzviita zvakare, kunyange zvichindiudza kuti kune tweaks asingatsigire 8.3 iyo yakaiswa zvakadaro uye vanoshanda zvakajairika, isu tichafanirwa kumirira ivo kuti vazvigadzirise se ifile auxo 3 pakati pevamwe
Pindura kune maruva
iFile iri kushanda pane vhezheni 8.3
Ehe, ndatenda, ndakakwanisa kuiisa
Manheru akanaka vakomana, ini ndaita jeri uye kana maitiro apera uye pandinovhura cydia, mifananidzo yese yanyangarika. Chero mhinduro usati wadzorera zvakare?
Tangazve nekubata Simba + Kumba bhatani kusvikira apuro rabuda uye iwe wosunungura zvese
Waita basa, Juan, ndinozviita, asi zvakangofanana .... Ndinofunga ichava nguva yangu yekudzorera. Kusema hupenyu hehe
Zvichiri hazvienderani pamwe azvino shanduro iTunes…. : @
iwe unofanirwa kurodha pasi vhezheni yetunes 12.01
Hongu, asi izvi hazvifanirwe kuitwa. Ini handinzwisise kuti sei gehena vasingaburitse vhezheni inoenderana neyazvino vhezheni yeTunes, iyo sekutonga kwese ndiyo iyo munhu wese anayo, nekudaro kutimanikidza kuti tiite izvi "ñapas" kuita jeri.
Izvo hazvipindirane neyazvino vhezheni yeTunes inoti ndeyekuputsika kwejeri kunosiya chimwe chinhu chinodiwa, zvirinani kumirira uone kana vachisunungura imwe ine zvikanganiso zvishoma.
ndizvo chaizvo havazi vese vane komputa ine zvinodiwa zvavanoshandisa ini ndaifanirwa kushandisa macomputer maviri ku jailbreak kunyangwe neiyi vhezheni vhezheni yavakaburitsa nhasi
cydia yakagadziridzwa taig 8.3.1 izvozvi
Fabricio Vazquez Montemurro akadaro
taig 2.1.3 enderera nekanganiso 1101
Pindura Fabricio Vazquez Montemurro
taig 2.1.3 inoramba ichindipa kukanganisa 1101
Iwe unofanirwa kuve neappstore password yakadzimwa, vhara chikamu, usave nekiyi password, deactivate, tsvaga iphone yangu uye usina zvigunwe zvemunwe zvakanyoreswa
iwe unoisawo mu ndege nzira
hongu, ndinoiisa mumhepo nzira
ndatenda ndichaedza izvozvi
Ndine iTunes 12.0.1, bvisa zvigunwe zveminwe, dzima tsvaga yangu iphone, vhara icloud chikamu, dzima yakavhura password
Peter HF akadaro
Zvinondipa kukanganisa -1002 uye ini ndato bvisa mapassword ese, zvinobatsira 🙁
Pindura kuna Peter HF
Zvitsvagirewo pachako munzvimbo yeappstore uye wakabuda here?
Alexis Reyes B. (@alexureyes) akadaro
iko kukanganisa kwakaitwa naFabricio Vazquez Montemurro izvo zvinogona kuitwa ???
Pindura kuna Alexis Reyes B. (@alexureyes)
bouquet ini ndatoita zvese izvozvo uye hapana. ndine itunes 12.0.1.26 x64
Pindura kuna Blacky
tsime ndakaedza pamakomputa maviri akasiyana asi ini ndakaita iwo mamwe matanho, ndakaimisa senge nyowani ndikazoita backup
Ndichiri kunamira pa20% ...
Ndakatozviita pamakomputa matatu uye hapana
Ndakaiyedzawo pa 32-bit pc uye hapana kana.
Pane chero munhu anoziva kana iyi nyowani vhezheni yemajeri inopindirana neKamera Kutaurirana Kit kuti ikwanise kushandisa USB kana SD makadhi kuisa mavhidhiyo kuzvishandiso senge Kodi (XBMC)? Ndatenda
Pindura kuna KevinCupraR
Ini ndakakwanisa kuisa Jeri pane iPhone 4S asi kana ndamboisa zvakandibhadharira basa kuti ndiwedzere 2 repos uyezve hapana ma tweaks asingakanganise uye haina kuisa, ndinoreva kuti ndine yakanaka icon uye zvishoma zvimwe ... ndinoita chakaipa here?
Pindura kuna deivi
iwe unofanirwa kuita iyo jailbreak maitiro pane komputa yemazuva ano?
ndinofanira kudzorera iphone?
Ini ndinogona here jailbreak kana ndikagadzirisa kuburikidza neOTA?
kana kupera kwejere kwapera ini ndasara pablock ndichiedza kudzoreredza, ndoitei?
yaive neshanduro 2.1.3 taig
Dzosa uye uzviite zvakare.
Isa chinongedzo cheiyo vhezheni muChirungu, kuti unzwisise zviri nani.
Hugo E. Martinez akadaro
Ndakaedza kuJailbreak yekutanga 2 vhezheni yeTaig uye yakagara yakafanana: Inotungamirwa kubva kuTunes haigone kuwanikwa uye zvinondipa chinongedzo kuti ndiiise. Ndoita sei?
Pindura Hugo E. Martinez
gadza vhezheni 12.0.1 yetunes uye zvese zvakagadziriswa.
Mhoro Sergio, ungandiudza iko kwekutora windows windows Bits, handisi kuiwana.
Kutenda kubva kuantamoamo
Ndakawana iyo OMG mhinduro:
kutanga vanoenda kuTunes vanoisa iwe kusetazve iphone, uye iwe unozotora download ios 8.3.
chechipiri iwe enda kune taig uye zvinokushandira.
rangarira kuita backup data rako kuti usarase chero chinhu.
Isu takaedza iyo Apple Watch, yakanakisa smartwatch yenguva yacho